ISolus 4: inguqulo entsha ye-distro enezinguquko ku-Budgie nakwamanye amaphakheji | Kusuka kuLinux
ISolus 4: inguqulo entsha ye-distro enezinguquko ku-Budgie nakwamanye amaphakheji
Sonke sazi okuhle Iphrojekthi yeSolus, i-distro egxile kakhulu ekuthuthukiseni imvelo yezithombe ngokuklama ngokucophelela kanye ne-minimalism ngokwemvelo yedeskithophu. Eqinisweni, njengoba wazi, inendawo yayo yedeskithophu ebizwa ngokuthi Ideskithophu ye-BudgieYize ungayifaka nakwamanye ama-distros ngokuzimela, eSolus ihlanganiswe ngokucophelela.
Manje iphrojekthi yethula uSolus 4, umvuzo womsebenzi wokuthuthukisa walo mphakathi nokuthi uza nezibuyekezo ezibalulekile ku-Budgie Desktop futhi nange-kernel evuselelwe, ngoba isebenzisa i-Linux 4.20 njenge-kernel ye-distro. Izindaba ezinhle kubo bonke abalandeli abazokwenza landa i-ISO ye-distro evela kuwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi noma ukuyibuyekeza uma isivele ifakiwe kumakhompyutha abo.
NgeSonto elifanayo, elihambisana nokwethulwa kweLinux 5.1 rc1 kernel, le distro nayo yethulwe. Isimo seBudgie seSolus 4 "Fortitude" sinokusha ukulungiselelwa ukwenza ngcono ukusebenza, kanye nolunye ushintsho oluthinta ngokusebenziseka kahle nolunye ushintsho oluzothuthukisa ulwazi lomsebenzisi lwale desktop yedrafikhi. Enye yalezi zinto ezintsha iyindlela "yeCaffeine Mode" evumela ukuthi uhlelo lungamiswa, luvinjelwe noma luvalwe, okusho ukuthi, uma sifuna, uhlelo luhlala luvukile kakhulu kunokujwayelekile lapho kungekho msebenzi.
Ngokufanayo, uzobona ushintsho oluthile noma ukuthuthuka kwamanye ama-applet, amawijethi nomphathi wezaziso, isitayela, njll. Kepha leso sigaba akusiso sodwa esilungisiwe. Nathi sinawo izibuyekezo zamaphakeji amaningi, njengeFirefox, LibreOffice, i-GNOME MPV ne-MESA, phakathi kokunye okuningi, manje okuzotholakala kuzinguqulo zakamuva kakhulu. Lokho wukuthi, konke ongakulindela kunguqulo entsha ye-distro yakho oyithandayo. Ngakho-ke manje ungazama ukuzibonela zonke lezi zinguquko!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » ISolus 4: inguqulo entsha ye-distro enezinguquko ku-Budgie nakwamanye amaphakheji
I-Linux 5.1 rc1: kufika i-RC yokuqala yegatsha le-5.1